Warshadda peptide ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | Yaasiin
A peptide yar oo molecule ah oo firfircoon ayaa lagu helay iyadoo la adeegsanayo farsamada dheef shiidka ee biosynthesis enzyme iyadoo la isticmaalayo pea iyo protein pea sida alaabta ceeriin. Peatide peatide wuxuu si buuxda u hayaa walxaha amino acid ee pea, wuxuu ka koobanyahay 8 amino acids muhiim ah oo jirka bini'aadamka uusan iskood isu soo saari karin, saamigooduna wuxuu ku dhow yahay habka lagu taliyay ee FAO / WHO (Ururka Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay iyo World Ururka Caafimaadka). FDA waxay u aragtaa digir inuu yahay badeecada dhirta ugu nadiifsan mana laha halista sanduuqa wareejinta. Pea peptide wuxuu leeyahay hanti nafaqo oo wanaagsan waana walxo cayiman oo aamin ah oo shaqeynaya.
Istaam Heerka Tijaabada ku saleysan
Foomka abaabulka Budada dharka ah, jilicsan, oo aan wax karin Q / HBJT 0004S-2018
ganaax （g / mL 100% iyada oo loo marayo shaandho leh furitaanka 0.250mm —-
Barootiin （% 6.25） ≥80.0 (Saldhig qallalan) GB 5009.5
maadada peptide (%) .070.0 (Saldhig qallalan) GB / T22492
Dambaska （%） .07.0 GB 5009.4
qiimaha pH —- —-
Biraha Culus （mg / kg） （Pb） * .40.40 GB 5009.12
Wadarta Bakteeriyada （CFU / g） CFU / g, n = 5, c = 2, m = 104, M = 5 × 105; GB 4789.2
Koolefyada （MPN / g） CFU / g, n = 5, c = 1, m = 10, M = 102 GB 4789.3
Bakteeriyada cudurada keena (Salmonella, Shigella, Vibrio parahaemolyticus, Staphylococcus aureus) * Taban GB 4789.4 、 GB 4789.10
Shaxda socodka ee Waxsoosaarka Pea petide
Astaamaha nafaqada ee ku jira borotiinka digirta ayaa loo isticmaali karaa in lagu kabo dadka leh cilladaha qaarkood, ama dadka doonaya inay nafaqadooda ku kobciyaan nafaqooyinka. Digirtu waa isha ugu wanaagsan ee laga helo borotiinnada, kaarboohaydraytyada, faybarka cuntada, macdanta, fiitamiinnada, iyo phytochemicals. Tusaale ahaan, borotiinka digirku wuxuu dheelitiri karaa qaadashada birta maadaama ay ku badan tahay birta.
Barootiinka digirta waxaa loo isticmaali karaa bedel ahaan borotiinka kuwa aan cuni karin ilaha kale maadaama aan laga soo qaadin mid ka mid ah cuntooyinka xasaasiyadda ku badan (qamadiga, lawska, ukunta, soya, kalluunka, qolofta, geedka looska, iyo caanaha). Waxaa loo isticmaali karaa alaabta la dubay ama barnaamijyada kale ee wax lagu karsado si loogu beddelo xasaasiyadaha caadiga ah. Waxaa sidoo kale looga shaqeyaa si warshadeyn ah sameynta wax soo saarka cuntada iyo borotiinno kale sida waxyaabaha hilibka beddeli kara, iyo waxyaabaha caanaha laga sameeyo. Soosaarayaasha beddelka waxaa ka mid ah Ripple Foods, oo soo saarta caano digir kale oo caano ah. Barootiinka digirta sidoo kale waa hilib-badal.
Barootiin digir ah sidoo kale waxaa loo isticmaalaa inay tahay qayb ka shaqeysa qiime jaban oo wax soo saarka cuntada ah si loo wanaajiyo qiimaha nafaqada iyo muuqaalka alaabta cuntada. Waxay sidoo kale wanaajin karaan nafwaayaha, emulsification, gelation, xasilloonida, ama sifooyinka isku xidhka dufanka ee cuntada. Tusaale ahaan, Awoodda borotiinka digirta si ay u sameysato xumbo deggan waa hanti muhiim ah oo ku jirta keega, suufiyada, dillaacyada la karbaashay, fudges, iwm.
Collagen Saafi Peptide
The Collagen Peptides ugu fiican